TCC Africa sy Eider Africa dia miara-miasa amin'ny mpikaroka mpikaroka momba ny asa voalohany avy any Sub Sahara Africa - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 6th May 2021 6th May 2021
Raha mpikaroka ianao dia mety hainao tsara ny lalan-dàlan'ny fikarohana sy ireo fanamby sy fotoana mety mifanaraka aminy. Vaovao tsara raha mpikaroka avy any Afrika Atsimon'i Sahara ianao satria ny mpiara-miasa aminay, TCC Africa sy Eider Africa dia nanambara ny fiaraha-miasan'izy ireo hanome tolotra arak'izany.
TCC Africa ary Eider Africa Nanana fiaraha-miasa ara-dalàna hanohanana ireo mpikaroka momba ny asa voalohany amin'ny alàlan'ny fitarihana mandritra ny androm-piainany fikarohana. Iray amin'ireo fanamby goavana atrehin'ireo mpikaroka momba ny asa voalohany ny fahazoana ny androm-piainany manomboka amin'ny tolo-kevitry ny fikarohana ka hatramin'ny famoahana. Ny tsy fahampian'ny fanohanana voafetra amin'ity dingana ity, dia mandray anjara amin'ny taham-pivoarana amin'ny fianarana ambaratonga faharoa. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, na ny TCC Africa na ny Eider Africa dia hameno ny banga amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny mpiara-mianatra ny mpikaroka asa aloha.
TCCAfrica dia hanolotra fiofanana amin'ny fifandraisana sy famoahana siantifika fampianarana, raha hanome kosa i Eider Africa mentorship ary fanohanana momba ny lalan-dàlan'ny fikarohana ho an'ireo mpikambana roa ao amin'ny fiarahamonina. Ireo mpikaroka momba ny asa voalohany dia mila misoratra anarana amin'ny TCC Africa Courses mba hahazoana fanohanana ny mpampianatra.
Hatreto dia mpikaroka 900 farafahakeliny avy any Sub Sahara no hahazo mentorship ho namana amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity.
Bebe kokoa momba ny EiderAfrica
Bebe kokoa momba ny TCCAfrica
Ivotoerana fanofanana momba ny serasera
TCC Africa no ivom-piofanana voalohany monina any Afrika izay mampianatra fahaiza-manao mahomby amin'ny mpahay siansa. TCC Africa dia Trust nahazo loka, natsangana ho orinasa tsy mitady tombom-barotra amin'ny 2006 ary voasoratra any Kenya. TCC Africa dia manome fanohanana mahomby amin'ny fanatsarana ny fikarohana'Ahaa output sy fahitana amin'ny alàlan'ny fiofanana amin'ny fifandraisana amin'ny siansa sy ny siansa. Hijery misimisy kokoa momba ny TCC Africa ao https://www.tcc-africa.org/about
Ity fanambarana ity dia navoaka voalohany tamin'ny https://www.tcc-africa.org/900-early-career-researchers-from-sub-sahara-to-be-mentored-in-their-research-lifecycle/
Fiaraha-miasa teo aloha tamin'ny TCC Africa sy Eider Africa
AfricaArXiv, Eider Africa, TCC Africa, ary PREreview dia manambatra hery hampivondrona ireo mpahay siansa manerana an'i Afrika sy ireo mpahay siansa mirotsaka amin'ny fikarohana mifandraika amin'ny Afrikana mandritra ny andiany dinika virtoaly 3 sy ny fanadihadian'ny mpiara-miasa.
TCC Africa niara-niasa tamin'ny AfricaArXiv dia nanolotra tolo-kevitra iraisana tamin'ny Fahaiza-manorina amin'ny famerenanana mialoha sy fanabeazana ny namana any Afrika.
Sokajy:	Fomba fanorenanafiaraha-miasa